मेलम्ची नदीमा आएको बाढीबाट जसोतसो ज्यान जोगाएका स्थानीय बासिन्दा अब कसरी दैनिकी चलाउने भन्ने चिन्तामा छन्। ज्यान जोगिएको खुशी बिर्सिसकेका उनीहरू घरखेत गुमाएको पीडाले रनभुल्लमा परेका छन्।
शेयर विश्व पौडेल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन्।
ललितपुरको लुकुन्डोलमा रातो चिमालको जीवाश्म भेटिनुबाट थाहा हुन्छ, लाखौँ वर्ष पहिले काठमाडौं उपत्यका निकै चिसो रहेछ। तापक्रम बढ्दै गएपछि राता चिमाल बिस्तारैै फुल्चोकी डाँडातिर सरेछन्।
आज संक्रमित र निको हुने हाराहारी, ५२ जनाको मृत्यु
नेपाल एसियन कप छनोटको अन्तिम चरणमा, प्लेअफ खेल्नुनपर्ने
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई उपचारका लागि दिल्ली लगियो
उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि खनालले भने- पार्टी जोगाउन सके मात्रै हामी सफल हुन्छौं
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले ४ असारमा विश्वासको मत लिने, यस्तो छ अंकगणित
एमिकस क्युरीमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पठायो प्रतिनिधि
ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षबाट राजीनामा दिन युवा संघको माग
सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय घिमिरे र केसी
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) पठाएको छ।
कृष्ण थापालाई सांसदबाट नहटाउने अन्तरिम आदेश खारेज
गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य कृष्ण थापालाई सांसदबाट नहटाउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
हिमालखबर विशेष सन्त गाहा मगर
‘कसले जुटायो-कसले फुटायो, नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्छ’
माओवादी ‘जनयुद्ध’ कसले गरायो, किन गरायो, ठीक थियो, थिएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर, दुई पार्टी एक ठाउँमा आएकैले संसद्‌मा ठूलो पार्टी बनेको त सही थियो। तर, चुनावी समीकरणबाटै बनेको पार्टीमा एउटा एकदमै ग्राह्‍य हुने र अर्को अछुत हुने किन भयो?
‘ओली एउटै व्यक्तिको प्रतापमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्थे’
एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा बसेर विकल्प दिन खोज्दा असफल भए। बेग्लाबेग्लै बसेर विकल्प दिन खोज्दा पनि असफल नै हुन्छन्। किनभने, यी दुवै हिँडिरहेको बाटो नै गलत छ।
‘पुष्पकमल दाहालको लक्ष्य बेग्लै रहेछ’
पुष्पकमल दाहालको लक्ष्य बेग्लै रहेछ। मूलतः बलियो नेकपाको अन्तरविरोधमा खेल्ने र सके नेकपा कब्जा गर्ने, नसके एमालेको एउटा हिस्सा अलग पारेर आफू बलियो बन्ने रहेछ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले प्रतिष्ठान देशकै ‘एक नम्बर’ राजनीतिक अखडा भएको बताएका छन्।
प्रदेश २ को बजेट : ‘सांसद रिझाउने’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको प्रदेश २ को बजेटमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधि र उपकरण खरीदका लागि रू.२० करोड विनियोजन गरिएको छ।
कांग्रेस तीन मन्त्रीसहित प्रदेश-२ सरकारमा सहभागी हुने
प्रदेश-२ सरकारमा सहभागी हुँदै कांग्रेस
बागमती प्रदेश बजेट : आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई मासिक भत्ता
बागमती प्रदेश सरकारले आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई मासिक शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएको छ।
काठमाडौंमा अझै एक साता निषेधाज्ञा खुकुलो नहुने, निर्णय गर्न प्रजिअकाे बैठक बस्दै
बाँदरमुढे घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग
काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ४५६ संक्रमित थपिए
काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ९३ संक्रमित थपिए
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४१ अर्बको बजेट ल्याएको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा साढे ३ अर्बले बढी हो।
नेपाली कांग्रेस सरकारमा आएपछि आइतबार कर्णाली मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको छ। यससँगै कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सत्ता साझेदारी शुरू भएको छ।
वनमन्त्रीको 'भाइरल' तस्वीरको यथार्थ
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि के होला सुदूरपश्चिम सरकार?
कसरी जोगाउने चुरे? चुरे बहुआयामिक पक्षसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसका सामाजिक-आर्थिक-वातावरणीय-प्राविधिक पाटोलाई ध्यान दिँदै यसको दिगो व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोग गरिनुपर्छ।
राष्ट्रहितको अजेन्डामा किन गोलबद्ध हुन सकेनन् दलहरू? राष्ट्रिय अजेन्डमा गोलबद्ध हुन नसक्नु तथा हाम्रो आफ्नै अलोकतान्त्रिक चरित्र र विधिको शासन विपरीतको कार्यबाट सिर्जित राजनीतिक अन्योलमा बाह्‍य शक्तिलाई दोष दिनुले न देशलाई गति दिन्छ, न लोकतन्त्र बलियो पार्छ।
यसरी पछ्याएँ बाघ र हात्ती! बर्दियाको खाता जैविकमार्ग भएर हात्ती नेपाल-भारत ओहोरदोहोर गर्छन् भने गाउँ नजिकैको सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएको पोखरीमा पानी पिउन बाघ आउने गरेका छन्।
कर बुझाउनलाई सरकारले दियो २५ असारसम्मको म्याद
आन्तरिक राजस्व विभागले २५ असारसम्म कर बुझाउन करदातालाई सूचना जारी गरेको छ।
संघले खारेज गरेको विवादित 'स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम'लाई प्रदेशले दिए निरन्तरता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संघले सांसद विकास कोष भनी चिनिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमलाई खारेज गरे पनि प्रदेशहरूले भने यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्।
डिशहोममा यूरोकपको प्रत्यक्ष प्रसारण डिटिएच सेवा प्रदायक कम्पनी डिशहोमले यूरोकपको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भएको छ।
कसले सहारा देला कोरोनाका टुहुरालाई?
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण नेपालमा हालसम्म आठ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएकोमा करीब १२ सय बालबालिका टुहुरा भएको अनुमान गरिएको छ। उनीहरुको हुर्काइ र रेखदेख कसरी होला भन्ने चुनौती देखिएको छ।
‘२१औं शताब्दीका अरनिको’
राजकुमार दाइले (राजकुमार शाक्य) ले पूर्वी भुटानको तकिलामा बनाएको गुरु पद्मसम्‍भवको विशाल मूर्ति अहिले प्रख्यात बनेको छ। मूर्ति निर्माणका बेला कालिगडहरूले सम्पूर्ण काम हातैले गरेको देखेपछि भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे वाई. थिन्लेले यसलाई विश्वकै एउटा नमूना हुने भन्दै उहाँको काँध थपथपाउनुभएको थियो।
नयनराज पाण्डेको ‘जियरा’ सार्वजनिक
लेखक नयनराज पाण्डेको नयाँ कृति ‘जियरा’ सोमबारबाट बजारमा आएको छ।
कँडेल र थुलुङलाई वातावरण साहित्य पुरस्कार
विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा दुई जना स्रष्टालाई पर्यावरण साहित्य पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ।
कोभिड डायरी : आफू जीवित रहेको पक्का गर्न घण्टैपिच्छे ‘अलार्म’!
एकपटक अक्सिजन लेभल घटेर तर्सिएपछि अब पीर पर्‍यो, राति निदाएको वेला अक्सिजन घट्यो भने? सोधखोज गर्ने नजिकमा कोही थिएनन्। त्यसपछिका दशौं रात घण्टा-घण्टामा अलार्मकै सहारामा बिते। अलार्म बजिरह्यो, मैले बाँचेको खुशीयाली मनाइरहेँ।
यसरी गरिन्छ ६ सय वर्षदेखि पानीकाे मुहान सफाइ (तस्वीरहरू)
भक्तपुरमा आज सिथि नख: अर्थात् पानीकाे मुहान सफाइ गर्ने दिन वरपरका पोखरी, इनार, कुवा, ल्वँ हिटी सफा गरेर मनाइँदै छ। यो क्रम ६ सय वर्षदेखि चलिरहेको छ।